Dawada Mediator: Shirkad Faransiis ah loo ganaaxay dhimashada uu sababay kaniiniga is caateynta | Saxil News Network
Shirkad Faransiiska laga leeyahay oo sameysa dawooyiinka ayaa lagu helay dambi ah in ay sameysay khiyaano iyo dil bilaasha h, ka dib markii ay soo baxday fadeexad ku saabsan kaniinigooda la isku caateeyo.
Dawadan waxaa loo sameeyay iscaateynta dhanka sokorta, waxaana suuqyada lagu iibinayay muddo 33 sano ah.
Kaniinigaas waxaa suuqyada laga saaray sannadkii 2009-kii, ka dib markii la ogaaday in uu sababi karo dhibaato xun oo dhanka wadnaha ah.
Waxaa la aaminsan yahay in boqollaal qof ay u dhinteen dawadaas ka dib markii ay isticmaaleen.
Illaa shan milyan oo qof ayaa la siiyay dawadaas, muddadii 30-ka sano ka badnayd, inkastoo ay jireen digniino la socday markasta.
Kumannaan qof oo dhibbane ah ayaa qeyb ka ahaa dacwaddii shirkadda loo haystay ee dhageysigeeda uu bilowday sannadkii 2019-kii.
Shirkadda sameysay kaniinigan ayaa beenisay in uu saameyn iyo dhibaato lahaa, balse Maxkamad ayaa Isniintii go’aamisay in shirkadda ay bixiso ganaax lacageed oo gaaraya $3.2 milyan oo dollar.
“Inkastoo ay ogaayeen halista, muddo sannado ah, weligood ma aysan qaadin tallaabooyiinka muhiimka ah ee looga hortagi karay,” ayey tiri garsooraha maxkamadda Sylvie Daunis.
Sidoo kale, guddoomiye ku xigeenkii hore ee shirkaddaas, Jean-Philippe Seta, ayaa lagu xukumay afar sano oo xabsi ah.
Hay’adda ansixisa dawooyiinka ee Faransiiska ayaa lagu xukumay ganaax lacag ah oo gaaraya €300,000 oo Yuuroo. Waxaa lagu eedeeyay in ay ku lug lahayd fadeexadda, ayna ku fashilantay in kaalintii laga filayay ay qaadato, ayna gabtay shaqadeeda, sida ay baahiyay Wakaaladda Wararka ee AFP.
Ka hor inta uusan soo bixin go’aankii Isniintii, dhakhtarka loo xilsaaray fashilintay dhibaatada dawadan, Dr Irène Frachon, waxay AFP u sheegtay in ay rajeyneyso in xukunka maxkamadda “uu keeno awoodda iyo arrimaha lagu fahmi karo sida khiyaanadaas ay muddo u socotay oo aan looga hortagin”.
Dalal kale oo ku yaalla Yurub, sida Taliyaaniga iyo Spain ayaa dawadaas mamnuucay sannadkii 2000.
Balse dadka faransiiska ayaa dawadan loo siin jiray arrimaha xanuunka sokorta iyo bukaannada kale ee wax cunidda badan.
Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in ay suuragal tahay in illaa 500 oo qof oo dhimatay lala xiriirinayo dawadan lagu magacaabo Mediator, muddadii u dhexeysay 1976 iyo 2009. Cilmi baaris kale ayaa sheegtay in tirada dhimashada ay gaari karto illaa 2,000 oo qof.
Su’aalaha weli jawaabta u bahan:
Maxay hay’adda ansixinta dawooyiinka muddo dheer ugu qaadatay in ay ka jawaabto digniinta la xiriirtay dawadan Mediator?
Muxuu ahaa doorta shirkadda soo saartay dawada ee lagu magacaabo Servier, oo ninka iskaleh uu xiriir dhow la leeyahay siyaasiyiin, sida madaxweynihii hore, Nicolas Sarkozy?
Ma jiray xeer dhab ah oo kala soocayay kooxaha kala duwan sida kuwa sameeyay, dadkii tijaabiyay, kuwii ansixiyay iyo suuqgeynta iyo la socoshaha saameynteeda?
Ama danaha gaarka ah ma waxay hor istaageen sixidda iyo shaqiijinta?
Imisa nooc oo kale oo dawo ah baa suuqa ku jira oo dadka la siiyaa, oo aan faa’iido lahayn ama halis wayn u geysan kara qofka isticmaalaya?
Imisaa dhaqaale ayey helaan dadka soo saaray dawooyiinkaas ee weli dhwaaca ku ah miisaaniyadda caafimaadka?
Xaguu ku dambeeyay laadarka weyn ee Ashish Vidyarthi?
BADHASAABKA GOBOLKA SAAXIL AYAA XILKII U KALA WAREEJIYEY MAAMULKII HORE EE DEGMADA SHEIKH IYO MAAMULKA CUSUB
Hay’ada Aafooyinka JSL oo Deeq Raashina U Qaybisay 250 Qoys oo Ku Tabaalaysan Dagmada Wadaamogoo
Nukliyeerka Caalamka: Hubka ay heysato Pakistaan oo ka badan midka Hindiya
Doorashada Itoobiya: Abiy oo wajahaya doorashadii ugu horreysay xilli ay xaaladda dalkiisa cakirantahay